မေတ္တာဂုဏ် ~ မြန်မာ့သံစဉ်စာသားများ
( ရွှေမေတ္တာ ပို့ကြထာဝစဉ်.. အကျိုးကလျှင် ဆယ့်တစ်ပါး ပွားတာ မုချပါပဲ.. ထင် )၂.. ( အိပ်တဲ့အချိန်မှာပင် ဇိမ်ယူလို့ ချမ်းသာဖို့အစဉ် )၂… ( ညတိုင်းကြိမ်ကြိမ် စက်တော့ ထက်မြက်ပါတဲ့ အိမ်မက်ကိုမြင် )၂… ( နိုးကြားပါလို့ မနက်လင်းရင် အစဉ်သုခကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတွင် )၂ သြော်… သူငါဖြစ်အင်… လူတကာချစ်ခင် နတ်တွေကတောင် စောင်မချင်…
( မေတ္တာအကျိုးမှာ ဖွင့်ကာပြရင် တန်ခိုး အာနိသင်.. ဗြဟ္မာဘုံလားရာ တရားပါပဲထင် မှတ်ပါစေကြောင်းပင် )၂ ကြည်ကြည်လင်လင်… ရွှေမေတ္တာ စွဲကြကိုယ်မှာအစဉ်…
မေတ္တာ …. ၀ ….. ၀ ….. ကိုယ်မှာအစဉ်….
( ငါးထွေသော ရန်သူပင်… ချစ်ပါစေလမ်းထွင် မေတ္တာရေဖျန်းရင်… ဘေးရန်ရှင်း အမှန်ကင်းစင် သွားလာရာတိုင်းရွှင်.. မေတ္တာပွင့်လန်းချင် မေတ္တာစောင်ခြုံရင် လုံတာပဲလို့ စွဲမြဲလူတိုင်းပင် )၂…
( အယူတော်တောင် နောင်စုတေ .. မလွဲပေ.. ပြည်ကောင်းကင်.. နတ်ဘုရင် ထင်ရှားအောင် မေတ္တာပွားကြ အစဉ် )၂ တည်ကြည်သော စိတ်မှာ ဒိဋ္ဌပင် မေတ္တာတော် ထိုအကျိုးကို ယုံကြည်ပါလျှင် လိုရာပြည့်ဖုိ့မြင်….
မေတ္တာ ……….. ၀ …….. ၀ ………… ကိုယ်မှာအစဉ်…။